सिवार: उपयोगी गुण र contraindications
प्रशान्त र एटलान्टिक महासागर, र थप ठीक उत्तर मा आफ्नो पानी खैरो शैवाल को एक विशेष प्रकार बढ्न - सिवार उपयोगी गुण एक लामो समय को लागि मानिसलाई ज्ञात गरिएको छ। को बारेमा तीस प्रजाति शैवाल विज्ञान द्वारा पत्ता र सफलतापूर्वक खाना, औषधि र कस्मेटिक उद्योगहरूमा प्रयोग गरिएको छ।
को उपस्थिति र संरचना
सिवार को विशाल thickets समान रूप सागर को चट्टानी तल कवर। बाह्य - तिनीहरूले downwardly घटना र मूल जरा (rhizoids) मा branching को बैरल शैवाल फारम330 सेमी देखि भिन्न चौडाई जो एक लामो गाढा हरियो टेप (thallus) 15 देखि 1 मीटर को .. तिनीहरूले कस सागर तल clings सिवार। शैवाल जीवन span यो2देखि 15 वर्ष बढ्छ, र औसत जसमा climatic अवस्था मा निर्भर गर्दछ। लेट शरद ऋतु सिवार हरेक वर्ष मृत्यु र हिउँदमा फेरि नयाँ बढ्न थाल्छ।
जो सफलतापूर्वक एक व्यक्ति प्रयोग सिवार, उपयोगी गुण thallus लागि मूल्यवान छ। तिनीहरूलाई मा मूल्यवान पदार्थ को एक ठूलो रकम उत्पादन र दुई उमेर द्वारा संचित। Slimy, नरम, संग तरंग मार्जिन, तिनीहरूले विशेष डंडे को मद्दतले सङ्कलन गर्न सजिलो हुन्छ। sporangia मा - गठन र सीधा thallus को सतह मा प्रबन्ध जुन मोबाइल zoospores प्रयोग सिवार प्रचारित रूपमा यो जनसंख्याको हानि गर्दैन।
को शैवाल कटाई पछि धोए र यसको सतह मा एक मिठाई, whitish कोटिंग परिणामस्वरूप, अलिकति सुकेको छन्। यो alginic एसिड खडा गर्न थाल्छ - सिवार हुन्छन् जो एक polysaccharide, यसको उपयोगी गुण रोक्न छैन। उहाँबाट अलग, यो शैवाल मा समावेश तरकारी प्रोटिन र फाइबर। भिटामिन को एक उच्च सामग्री ए, B6, बी 12, सी, डी र पीपी यो सबैभन्दा मूल्यवान उपहार सागर को एक बनाउन, र यसको संविधान तत्व सेट (म्याग्नेसियम, पोटासियम, क्याल्सियम, मैंगनीज, फलाम, फस्फोरस) - उत्पादन, प्रत्येक लागि आवश्यक छ, जो । र, को पाठ्यक्रम, हामी जसद्वारा को आयोडिन बारेमा बिर्सनु हुँदैन शैवाल विशेष लोकप्रियता प्राप्त, यो मा मानव शरीर अझ लिएको छ जसको अर्थ एक जैविक राज्य, मा निहित छ देखि।
मानव शरीर को सबै, बिना अपवाद र आफ्नो कार्य सिवार सकारात्मक प्रभाव छ। जब मानसिक र स्नायु थकान शैवाल को नियमित खपत सिफारिस गरिएको छ। therein बी भिटामिन र आयोडिन समावेश कारण, यो मानव स्नायु प्रणाली saturates र यसको कार्य normalizes। थायरयड ग्रंथि को पूर्ण कार्यका लागि अपरिहार्य छन् जो Laminaria, उपयोगी गुणहरू, एक रोगनिरोधी रूपमा प्रयोग गरिन्छ Basedow रोग।
तपाईं आफ्नो आहार laminaria समावेश भने, हामी निकै मात्र पाचन सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि पुरानो कब्जियत र संबंधी बृहदांत्रशोथ छुटकारा गर्न। चयापचय प्रक्रिया शरीर मा सामान्यकृत छ, र यसैले यसलाई वजन लागि एक उत्कृष्ट उपकरण रूपमा मानिन्छ गर्न सकिन्छ।
Laminaria को नियमित प्रयोग, बनाउँछ विभिन्न संक्रमण प्रतिरोध प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउँछ। साथै, यो एक उत्कृष्ट छ atherosclerosis को रोकथाम र हृदय रोग।
एक कामोद्दीपक रूपमा प्रयोग यौन कार्य सिवार उल्लङ्घन को मामला मा। र cosmetology मा कपाल र छाला हेरविचार उत्पादन बलियो लागि एक उत्कृष्ट उपकरण छ।
तर, जो सावधानीपूर्वक प्रयोग सिवार अनुसार केही प्रतिबंध हो। शरीर को लागि, तर व्यक्तिगत घृणाको र सम्भव एलर्जी प्रतिक्रिया को मामला मा शैवाल राम्रो गुण प्रयोगको त्याग्न पर्छ। चरम हेरविचार संग शैवाल गर्न nephritis भोगिरहेका वा फोडे गर्भवती महिला र मान्छे उपचार गर्न आवश्यक छ।
यो एउटा अचम्मको रूख छ - Mulberry: असल र हानि ...?
स्वास्थ्य कायम राख्न एक तरिका रूपमा Hypoxic मिलाइएको।
शरीर को शुद्धीकरण लागि Sorbents - कि वा गर्न
Pancreas। हर्बल उपचार
पानी ठंडा सिस्टम CORSAIR H110i GT: सिंहावलोकन, फोटो र समीक्षा
अब्दुल Alhazred - यो पागल अरब, को "Necronomicon" लेखे
रातो बन्दागोभी - उपयोगी गुणहरू
नुन-मुक्त आहार - सार के हो?
दिग्गज बीएमडब्ल्यू 750i
र तपाईं सीरीज "क्लोन" मा कत्तिको एपिसोडहरू जान्नुहुन्छ?
जापान: सिसाई मिनिटो
भाइरस AdvanceElite: हटाउन कसरी?
को Kama जलविद्युत स्टेशन र यसको कारण मा दुर्घटना
गोगोल को रहस्य, पहेलियाँ र अनुशासन
वायु सेना 1 पुटिन गुजर के मा?